COVID-19 မူလဇစ်မြစ်ဆိုင်ရာ အမေရိကန်နိုင်ငံ ကွန်ဂရက်အစီရင်ခံစာတွင် ဝူဟန့် ဓာတ်ခွဲခန်း ကိန်းဂဏန်းများအား ပုံကြီးချဲ့ဖော်ပြထား - Xinhua News Agency
ပေကျင်း၊ ဩဂုတ် ၃၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
COVID-19 ရောဂါမူလဇစ်မြစ်ဆိုင်ရာ အမေရိကန်နိုင်ငံ ကွန်ဂရက်အစီရင်ခံစာတစ်စောင်၌ ဝူဟန့် ရောဂါပိုးမွှားဗေဒအင်စတီကျု (WIV) တွင် အသုံးစရိတ် ကိန်းဂဏန်းများအား ထောင်ပေါင်များစွာ သိသိသာသာ ပုံကြီးချဲ့လျက် အချက်အလက်အမှားနှင့်အတူ လူထုနှင့် မီဒီယာအား အထင်အမြင်မှားစေရန် ဖော်ပြထားကြောင်း သိရသည်။
အစီရင်ခံစာက WIV တွင် ဖြစ်ပျက်နေမှုနှင့် “ဓာတ်ခွဲခန်းမှ လွတ်ထွက်လာမှုသက်သေ” အဖြစ် “ဘေးကင်းစိတ်ချရေး စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် ပုံမှန်မဟုတ်သော ထိန်းသိမ်းမှု” ကို မှန်းဆချက်များဖြင့် “ပုံမှန်မဟုတ်သော” အရာများကို တင်ပြရန် ပုံကြီးချဲ့ထားသော ကိန်းဂဏန်းများအား ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။
ရီပတ်ဘလစ်ကုန် ကိုယ်စားပြုအမတ် Michael McCaul က ဦးဆောင်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံ အောက်လွှတ်တော် ပြည်ပရေးရာကော်မတီ အနည်းစုဝန်ထမ်းများက ဩဂုတ်လ အစောပိုင်းတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည် အစီရင်ခံ၌ WIV အစိုးရ ဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာမှ ရယူထားကြောင်း ကိုးကားထားသည့် ကိန်းဂဏန်းများပါဝင်သော စာရင်းတစ်ခုအား စာမျက်နှာ ၂၀ တွင် ဖော်ပြထားသည်။ မသိနိုင်သောအကြောင်းပြချက်များအတွက် အစီရင်ခံစာပါ ကိန်းဂဏန်းများသည် WIV ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ အချက်အလက်များနှင့် များစွာကျော်လွန်နေကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ စာရင်းတွင် စုစုပေါင်း အသုံးစရိတ်ကိန်းဂဏန်း ၇ ခု ပါဝင်သည်။ ယင်းအနက် သုံးခုမှာ ဆယ်ဆ ချဲ့ကားဖော်ပြထားသလို တစ်ခုမှာမူ အဆတစ်ရာ ပုံကြီးချဲ့ထားခြင်းဖြစ်ပြီး တစ်ခုကိုလည်း အဆထောင်ဂဏန်း ချဲ့ကားဖော်ပြထားကြောင်း သိရသည်။
WIV တွင် လေဝင်လေထွက်စနစ်အသစ်အတွက် အသုံးစရိတ်ဖော်ပြမှုသည် ဥပမာတစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြထားသည်။ တရုတ်အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ယွမ် ၃.၉၂၆၈၇၆၉၄ သန်း သို့မဟုတ် ယွမ် ၃.၉၃ သန်းအောက်မျှသာရှိကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ သို့ရာတွင် ကွန်ဂရက်အစီရင်ခံစာတွင်မူ ယွမ် ၃.၉၃ ဘီလီယံနှင့် ညီမျှသောပမာဏဖြစ်သည့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၀၆ သန်းဟူ၍ ဖော်ပြထားရာ တရုတ်တွင် မူရင်းရေးသားထားသည့်ထက် အဆတစ်ထောင်များပြားနေခဲ့သည်။
အလားတူပင် လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုအတွက် အသုံးစရိတ်ကို ယွမ် ၈၃၀,၀၀၀ ရှိသည်ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုရာတွင် ယွမ် ၈.၃ သန်းနှင့် ညီမျှသည့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၃ သန်းအဖြစ် ၁၀ ဆခန့် ပိုလွန်ကာဖော်ပြထားသည်။
Michael McCaul ၏ မီဒီယာဆက်ဆံရေးပုဂ္ဂိုလ်ထံ အီးမေးလ်ပို့ကာ ဖြေရှင်းရန် တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခြင်းမပြုသဖြင့် ဤကဲ့သို့မှားယွင်းမှုမျိုး မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ထွက်ပေါ်လာသည်ကို မသိရှိရသေးပေ။
မတ်လကုန်ပိုင်းတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော COVID-19 ရောဂါဇစ်မြစ်ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့ ပူးတွဲလေ့လာမှုတွင်လည်း ဓာတ်ခွဲခန်းမှ လွတ်ထွက်လာခြင်းမှာ “လုံးဝဖြစ်နိုင်ခြေမရှိကြောင်း” ဖော်ပြထားပြီး ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကလည်း အမေရိကန် ကွန်ဂရက်အစီရင်ခံစာမှာ “လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိကြောင်း သို့မဟုတ် သိပ္ပံနည်းလမ်းမကျကြောင်း” ဩဂုတ် ၃ ရက်က ပြောကြားခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ နာမည်ကြီး သတင်းစာနှစ်စောင်ကလည်း ၎င်းတို့၏ ထင်မြင်ချက်စာမျက်နှာများ၌ ကွန်ဂရက်အစီရင်ခံစာမှ ပုံကြီးချဲ့ဖော်ပြထားသော ကိန်းဂဏန်းများအား ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ၎င်းတို့က အမှားပြင်ဆင်ချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
The Wall Street Journal ၏ အမှားပြင်ဆင်ချက်တွင် “စာရေးသူများသည် သိသာထင်ရှားစွာ ဘာသာပြန်မှားယွင်းနေသော တရုတ် စာရွက်စာတမ်းအား ကိုးကားထားသည့် အောက်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားရေးရာကော်မတီ အစီရင်ခံစာကို မှီညမ်းထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း” ရေးသားထားသည်။
The Washington Post ၏ အမှားပြင်ဆင်ချက်တွင်လည်း “ဤဆောင်းပါးတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလက ဝူဟန့် ရောဂါပိုးမွှားဗေဒအင်စတီကျုမှ ဝန်ဆောင်မှု သဘောတူစာချုပ်တောင်းဆိုချက်များ တန်ဖိုးကို မှားယွင်းဖော်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်း” ဖော်ပြထားသည်။
ကွန်ဂရက်အစီရင်စာခံကိုယ်တိုင်ကမူ အမှားပြင်ဆင်ရန် ကျန်ရှိနေသေးပေသည်။ (Xinhua)
U.S. congressional report on COVID-19 origins exaggerates Wuhan lab numbers
Source: Xinhua| 2021-08-25 21:29:13|Editor: huaxia
BEIJING, Aug. 25 (Xinhua) — A U.S. congressional report on the origins of COVID-19 have drastically exaggerated budget numbers at the Wuhan Institute of Virology (WIV) by up toathousandfold, misleading the public and the media with false information.
The report cited the exaggerated numbers to suggest that something “unusual” was happening at the WIV, speculating “safety concerns and unusual maintenance” as “evidence ofalab leak.”
The report, published in early August by the U.S. House Foreign Affairs Committee minority staff led by Republican Representative Michael McCaul, includes on Page 20achart that quoted figures from the WIV’s government procurement web pages. For unknown reasons, the numbers in the report far exceeded those on the WIV website.
Take the budget foranew ventilation system at the WIV as an example. It was recorded as 3.92687694 million yuan or just under 3.93 million yuan on the Chinese web page. But the number in the congressional report was 606 million U.S. dollars — equal to 3.93 billion yuan, 1,000 times the number originally written in Chinese.
Similarly, the budget for security services was 830,000 yuan, but the number was translated into English as 1.3 million U.S. dollars — equal to 8.3 million yuan, 10 times the number in Chinese.
A joint WHO-China study on the origins of COVID-19, published at the end of March, said thatalab leak was “extremely unlikely.” A Chinese foreign ministry spokesperson on Aug.3called the U.S. congressional report “not credible or scientific.”
The Wall Street Journal correction said, “The authors relied onaHouse Foreign Affairs Committee report, which cited an evidently mistranslated Chinese document.”
The Washington Post correction said, “The congressional report referenced in this article misstated the value of service contract requests issued by the Wuhan Institute of Virology in September 2019.”
The congressional report itself remains uncorrected. Enditem